बजेटभन्दा बढीको आयात मात्रै ! यस्तो पाराले कसरी आउँछ समृद्धि ? (भिडियोसहित) « News24 : Premium News Channel
बजेटभन्दा बढीको आयात मात्रै ! यस्तो पाराले कसरी आउँछ समृद्धि ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २४ असोज । आयात निर्यातको स्थिति –
आर्थिक वर्षः २०७३/७४मा
कुल आयातः १२ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड २१ लाख १८ हजार
कुल निर्यातः ८१ अर्ब १९ करोड १६ लाख ५२ हजार
कुल व्यापार घाटाः ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड ४ लाख ६६ हजार
नेपालको व्यापार साझेदार १५५ देशमध्ये अधिकतम् कारोबार भएका २० देशमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४को आयात, निर्यात र व्यापार घाटाको स्थिति यस्तो छः
आयातः ८ खर्ब १० अर्ब ९० करोड ४८ लाख ६१ हजार
निर्यातः ४६ अर्ब ६० करोड ४८ लाख ५६ हजार
व्यापार घाटा ः ७ खर्ब ६४ अर्ब ३० करोड ५हजार
आयातः १ खर्ब ५९ अर्ब ९८ करोड ३ लाख १६
निर्यातः २ अर्ब ४३ करोड ७७ लाख ४४ हजार
व्यापार घाटाः १ खर्ब ५७ अर्ब ५४ करोड २५ लाख७२ हजार
आयातः २० अर्ब ८३ करोड ६२ लाख ७० हजार
निर्यातः १ अर्ब २२ करोड ५५ लाख २ हजार
व्यपार घाटाः १९ अर्ब ६१ करोड ७ लाख ६८ हजार
आयातः १३ अर्ब ५२ करोड ९५ लाख ४९ हजार
निर्यातः ६१ करोड ५१ लाख ३२ हजार
ब्यापार घाटाः १२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख १७ हजार
आयातः १३ अर्ब २१ करोड १७ लाख १७ हजार
निर्यातः १ अर्ब ००७२ लाख ३६ हजार
ब्यापार घाटाः १२ अर्ब २० करोड ४४ लाख ८१ हजार
आयातः १३ अर्ब १३ करोड ४९ लाख ८८ हजार
निर्यातः ३ करोड २६ लाख ५५ हजार
ब्यापार घाटाः १३ अर्ब १० करोड २३ लाख ३३ हजार
आयातः १२ अर्ब ४७ करोड १ लाख ६४ हजार
निर्यातः ३७ लाख ९९ हजार
ब्यापार घाटाः १२ अर्ब ४६ करोड ६३ लाख ६५ हजार
आयातः १० अर्ब २२ करोड ६६ लाख ५२ हजार
निर्यातः ८ लाख ९४ हजार
ब्यापार घाटाः १० अर्ब २२ करोड ५७ लाख ५८ हजार
आयातः १० अर्ब १६ करोड ४६ लाख ८८ हजार
निर्यातः १६ करोड ९० लाख ४९ हजार
ब्यापार घाटाः ९ अर्ब ९९ करोड ५६ लाख ३९ हजार
आयातः १० अर्ब ०२ करोड ८४ लाख १२ हजार
निर्यातः २४ करोड ६६ लाख १७ हजार
ब्यापार घाटाः ९ अर्ब ७८ करोड १७ लाख ९५ हजार
आयातः ९ अर्ब ८९ करोड ४० लाख ७७ हजार
निर्यातः ९ अर्ब १६ करोड २५ लाख ३९ हजार
ब्यापार घाटाः ७३ करोड १५ लाख ३८ हजार
आयातः ९ अर्ब ५९ लाख ८३ हजार
निर्यातः २ करोड ७८ लाख ४९ हजार
ब्यापार घाटाः ८ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख ३४ हजार
आयातः ८ अर्ब १ करोड १८ लाख ९१ हजार
निर्यातः ८५ करोड ८१ लाख ६८ हजार
ब्यापार घाटाः ७ अर्ब १५ करोड ३७ लाख २३ हजार
आयातः ७ अर्ब ८७ करोड २९ लाख ४ हजार
निर्यातः ३ अर्ब १३ करोड ९८ लाख ८४ हजार
ब्यापार घाटाः ४ अर्ब ७३ करोड ३० लाख २० हजार
आयातः ७ अर्ब ७५ करोड ३ लाख ७२ हजार
निर्यातः १ अर्ब ३ करोड ७४ लाख ४ हजार
ब्यापार घाटाः ६ अर्ब ७१ करोड २९ लाख ६७ हजार
आयातः ६ अर्ब ३१ करोड २३ लाख ३ हजार
निर्यातः ३ करोड ७३ लाख १६ हजार
ब्यापार घाटाः ६ अर्ब २७ करोड ४९ लाख ८६ हजार
आयातः ६ अर्ब ४ करोड ५२ लाख २२ हजार
निर्यातः ३३ करोड ६० लाख ५२ हजार
ब्यापार घाटाः ५ अर्ब ७० करोड ९१ लाख ७० हजार
आयातः ५ अर्ब ९९ करोड ३१ लाख ५ हजार
निर्यातः ६ करोड ७ लाख ७६ हजार
ब्यापार घाटाः ५ अर्ब ९३ करोड २३ लाख २९ हजार
आयातः ५ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ११ हजार
निर्यातः ६४ करोड ३२ लाख ४१ हजार
ब्यापार घाटाः ५ अर्ब ५५ लाख ६९ हजार
आयातः ५ अर्ब ३८ करोड ३५ लाख २० हजार
निर्यातः ४ करोड २९ लाख २८ हजार
ब्यापार घाटाः ५ अर्ब ३४ करोड ५ लाख ९१ हजार
नेपालले अर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १५५ देशसँग कारोबार गरेको छ । जसमध्ये नेपालले ६२ प्रतिशत व्यापार भारतसंग मात्र गरेको छ भने ११ प्रतिशत व्यापार चीनसंग गरेको छ । बाँकी २७ प्रतिशत मात्र अन्य देशहरुसंग व्यापार गरेको तथ्यांक छ । नेपालले जुन मात्रामा यी देशहरुबाट सामान अयात गरेको छ, त्यसको तुलनामा नेपालले गर्ने निर्यात भने निकै न्यून छ । यसर्थ नेपालको अर्थतन्त्र पूर्णतः परनिर्भरप्रायः छ ।
कसरी सम्भव छ समृद्धि ?
तथ्यांक भन्छ कि, देशको अर्थअवस्था जर्जर छ । आयातको तुलनामा निर्यात अत्यासलाग्दोब बढी छ । देशमा समृद्धिको ठूला कुरा हुन्छ तर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुनै ठोस पहल भएको छैन । उत्पादनभन्दा आयातमा जोड दिएका कारण देशको अर्थस्थिति दयनीय अवस्थामा पुगेको हो । यतिसम्म कि देशको कुल बजेटको हाराहारीमै आयात गरिने देशसँगको व्यापार घाटा छ । अर्थविद्हरु भन्छन्, अहिलेको तथ्यांकले देश झन् परनिर्भर बन्दैछ ।
झन्पछि झन् आयात गर्ने वस्तु र त्यसको मात्रा बढ्र्दैछ । स्वदेशमा भएका सीमित उद्योग पनि बन्द छन् । नयाँ उद्योग खोल्ने ठोस प्रयास भएको छैन । आयातको तुलनामा निर्यात छ नगन्यप्रायः छ । हामीसँग स्रोत, साधन र जनशक्ति छ । तर त्यसको प्रयोग नभएका कारण देशको यो हविगत भएको अर्थविद्हरुको विश्लेषण छ ।
पटक पटकको राजनीतिक आन्दोलनसँगै व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर, देशको अर्थतन्त्र र नागरिकको अवस्थामा कुनै उल्लेख्य परिवर्तन आएन । यसको मूल कारण परनिर्भर अर्थतन्त्र नै हो । जब सम्म हामीले बस्तु उत्पादन र निर्यातमा जोड दिँदैनौ तबसम्म समृद्धि संम्भव छैन ।
आमनेपालीको जीवनशैली क्रमशः भड्किलो बन्दैछ । हामी विलासी बन्दै छौं । तर हाम्रो उत्पादन छैन । विदेशी उत्पादन किनेर रमाइरहेका छौं । हामी श्रम गर्न विदेश जान्छौं । अलिअलि पैसा कमाउँछौं, अति त्यो पैसा विलासी सामान किनेर विदेशै पठाउँछौं । यसले मुलुकलाई झन् परनिर्भर बनाउँछ ।
अहिले देशको खास आवश्यकता भनेको उद्योग नै हो । हामीसँग यतिधेरै स्रोत र साधन छ, तर त्यसको प्रशोधन, उत्पादन र बजारीकरण हुन सकेको छैन । मुलुक समृद्धि बनाउने हो भने उत्पादन र बस्तु निर्यातलाई बढाउनै पर्छ ।